Somali International University » Sep-9 (SIU)- Toddobaadka Dhaqanka.
Sep-9 (SIU)- Toddobaadka Dhaqanka oo lagu soo gabagabeeyay Jaamacaddda SIU
Toddobaakan dhaqanka oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen xafiiska Hormuudka arimaha ardayda iyo midowga aradayda Jaamacadda Somali International University ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro iyo tartamo ka turjumaya hiddaha iyo dhaqanka Soomalidda.
Ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ayaa soo bandhigay riwaayado, ciyaaro, suugaan iyo agabka astaanta u ah hiddaha iyo dhaqanka Soomalidda.
Dhinaca kale, ka sakow maamulka iyo macalimiinta Jaamacadda waxaa si weyn toddobaaka dhaqanka ugu soo muuqday hal abuurayaal, abawaano, qorayaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa kaydinta iyo ilaalinta dhaqanka Soomaliga.
Toddobaaka dhaqanka oo ay ku loolameen kuliyadaha kala ah: kuliyadda Ganacasiga iyo dhaqaalaha, kuliyadda Cafimaadka, kuliyadda siyaasadda iyo celmiga bulshadda, kuliyadda Engineerka iyo Computerka iyo Kuliyadda Celmiga beeraha ayaa waxay guushii raacaday kuliyadda celmiga Beeraha halka kaalinta labaad iyo sadaxaad ay kala galeen kuliyaddaha Ganacsiga iyo dhaqaalah iyo kuliyadda caafimaadka.
Ka hor inta aan la bixin abaalmarindda waxaa hadal soo xiritaan ah ka jeediyay toddobaaka dhaqanka ku simaha gudoomiyaha Jaamacadda , ahna madaxa waxbarashadda jaamacadda Mudane Shaafici Diriye Cabdi “ dhamaan ardayda jaamacadda, macalimiinta, Guddiga Garsoorka iyo marti sharafka kalaba waad ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina.” “ ka sakow in ay Jaamacaddu u furantahay kobcinta maskaxadda ardayda iyo baridda xirfado ay ku shaqaystaan waxaan muhiim u argnaa dhiiri galinta hiddaha, suugaanta iyo dhaqanka Soomaliyeed” Shafici Diriye.
Kuliyadda celmiga beeraha oo kow gashay ayaa waxaa lagu abaal mariyay hal neef uu geel ah, halka kuliyadda labo gashay ee Dhaqaalaha iyo Ganacsiga neef lo’ ah lagu abaalmariyay. Kuliyadda caafimaadka oo kaalinta saddexaad gashay ayaa heshay labo neef oo ari ah.